Dieny izao, atao izay azo atao… | NewsMada
Dieny izao, atao izay azo atao…
Mialoha ny tena fampielezan-kevitra izao. Dieny izao, tokony hatao izay azo atao. Tsy inona fa ny fampahafantaran’ny mpirotsa-kofidina ny momba azy, ny laharany amin’ny biletà tokana… Anisan’ny lehibe indrindra amin’izany ny foto-kevitra manetsika sy nanesika azy hirotsa-kofidina, ny vinam-piarahamonina tiany hotratrarina amin’izany, ny fandaharanasa hanatanterahana azy, ny paikady sy ny fomba fiasa…
Mba izany ahay amin’izay no handresen-dahatra ny olom-pirenena. Amin’izany, efa tokony hahita taratra ny fiovana sy fanovana ny amin’izay hataon’ny mpirotsa-kofidina sy ny ho fomba fiasany ny mpifidy: miova mpitondra, miova sata. Fifanarahana politika sy sosialy ny fifidianana, itakiana tamberin’andraikitra amin’ny kandidà ny tambin’ny fampindraman’ny olom-pirenena fahefana amin’izay hofidina eo: inty sy inday.
Amin’ireo mpirotsa-kofidina, iza no tena manana izay azo anaovana fifanarahana politika sy sosialy izay? Foto-kevitra mitombina sy maharesy lahatra, vinam-piarahamonina ho araka ny hetahetan’ny vahoaka sy tena mahasoa azy, fandaharanasa azo tanterahina, paikady sy fomba fiasa azo antoka fa hahombiazana… Miainga amin’ny zava-misy sy azo iainana ary mampandroso izany, fa tsy nofinofy na fampandriana adrisa.
Manana adidy aman’andraikitra amin’izany ny olom-pirenena: mamantatra, mandinika, mampitaha, misafidy. Ny ataon’ny tena ihany tsinona no hahasoa na haharatsy ny tanàna sy ny ho avin’ny taranaka. Mba ho tena tompon’adidy aman’andraikitra amin’izay, fa tsy sanatria antony hafa na tsy fidiny ny safidy. Raha mila fiovana sy fanovana ny olom-pirenena amin’ny alalan’ny fifidianana, mila miova sy manova fijery koa.
Dieny izao, irosoana izay fiovana sy fanovana izay amin’ny fanarahana sy fampitahana ireo mpirotsa-kofidina, araka ny foto-kevitra voizina, ny vinam-piarahamonina ampanantenainy, ny fandaharanasa arosony, ny paikadiny sy ny fomba fiasany… Misy ny tena manana izany, vonona sy sahy… ? Anjaran’ny tsirairay ny mandray andraikitra tandrify azy avy, fa izay miova no afa-kanova ary izay miarina na afa-kanarina.